Veloma ry KMail, hiverina any Thunderbird | Avy amin'ny Linux
Veloma ry KMail, hiverina any Thunderbird aho
De Thunderbird efa niresaka tsara isika tamin'ny Avy amin'ny Linux ary tsy mila fampidirana izany, ary araka ny fantatrao, io dia iray amin'ireo mpanjifa mailaka tsara indrindra misy ankehitriny GNU / Linux fa ny Windows.
Rehefa mampiasa tontolon'ny Desktop voasoratra amin'ny GTK, Thunderbird dia ilay rindranasa nitantana ny mailako, fa rehefa nifindra tany aho KDE, Nanomboka nampiasa aho KMail.
Ny olana amin'ny KMail dia rehefa nanomboka nampiasa ianao Akonadi hitantanana ny hafatra (na ny database of the message) nidina tany amin'ny trano fidiovana ny zava-drehetra. Raha tokony hanamora ny raharaha dia heveriko fa manahirana azy ireo izany.
Ny dingan'ny fitehirizana ireo hafatra dia manelingelina, ankoatr'izay, tsy azo atao ny manasaraka ireo karazana kaonty na mampiasa mpizara proxy tsy miankina, izay Thunderbird raha avelanao.
Con Thunderbird Afaka manana kaonty betsaka araka izay tadiaviko aho, na avy amin'i Gmail, Yahoo, Avy amin'ny Linux, Mail Movistar, Outlook, mampiasa IMAP o POP3. Araka ny efa nolazaiko teo dia afaka manapa-kevitra izay proxy hampiasaina aho na eo aza ny rafitra voalohany KMail, Tsy afaka aho.
Saingy tsy mijanona eo ny tombony, afaka mampiasa Thunderbird araka izay iriko aho Mpanjifa mailaka, Mpamaky RSS y Mpanjifa hafatra, izany hoe afaka miresaka amin'ny olona ifandraisako avy amin'ny Facebook, GMail, ary serivisy hafa mampiasa XMPP.
Araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambony, afaka mampiasa ihany koa aho Thunderbird amin'ny maha mpanjifa azy IRC o Twitter. Raha ny tena izy, rehefa manamboatra ny kaontinay izahay, dia tsy miova ny fomba hanarahana raha tsy amin'ny fampiharana hafa rehetra:
Ary eto dia hitantsika ny hetsika Thunderbird:
Manondrana sy manafatra. Ny Plugins-ko
Fa ny tsara indrindra dia afaka mitondra ny mailako any amin'izay toerana tsy misy olana aho. Mba hanaovana an'io dia mila mandika ilay fampirimana fotsiny aho ~ / .Thunderbird.
Saingy araka ny fantantsika, ity fampiharana ity dia mitovy amin'ny Firefox manana Extensions. Manoro hevitra manokana ny plugin aho ImportExportTools.
Ny zavatra tsara momba ity fanitarana ity dia mamela antsika fanondranana o Import ny hafatray avy, na mankany amin'ny lahatahiry manokana miendrika endrika TXT, EML, HTML, CVSna MBox. Inona koa, afaka manafatra hafatra SMS avy amin'ny programa "SMS Backup and Recovery" amin'ny Android sy Nokia2AndroidSMS.
Fanitarana iray hafa izay atolotray raha te hanome ny fomba fampiharana bebe kokoa izahay Resadresaka Thunderbird:
Tsy dia mila fotoana firy hampiharana ireo fanovana hita maso, ary afaka esorina izy ireo amin'ny alàlan'ny fandefasana ny extension. Anisan'ireo fanovana mahaliana indrindra ny safidy hamaly ny hafatra amin'ny varavarankely iray ihany, araka ny hitantsika eto ambany:
Tsy manana olana aho miaraka amin'ny lohahevitra fampidirana. Thunderbird mijery sy miasa tanteraka amiko KDE, ka manomboka izao dia manao veloma ny KMail Elaela
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Veloma ry KMail, hiverina any Thunderbird aho
Ny marina dia tsy nahaliana ahy ny KMail fa nanandrana nampifandray ny kaontiko openmailbox.org aho saingy tsy niasa mihitsy, ao amin'ny Thunderbird dia mora kokoa izany ary afaka mampiasa ny kaonty openmailbox sy ny Outlook amin'ny toerana iray ihany aho :-), Thunderbird no tsara indrindra !
Izay no tonga naneho hevitra, misaotra fa tsy izaho irery.
Misy aminareo ve afaka nampifandray ny Openmailbox amin'ny Kmail?
Raha mbola nanandrana aho dia tsy mandeha izany.
Ampifandraisiko tsy misy olana izany. Andro lasa izay dia tsy nifandray izy io satria ny mailaka openmailbox dia manavao ireo mpizara, afa-tsy izay, tsy nanana olana aho.
Ankehitriny, ny kmail sy amin'ny fifandraisana amin'ny ankapobeny dia tsy maharesy lahatra ahy, hoy i elav, dia toa sarotra ny zava-drehetra, amin'ny farany dia mahatsapa aho fa miasa miaraka amin'ny corset ary io no fahatsapako rehefa miasa miaraka amin'ny kde aho, avy amin'ny ny fahitako azy dia tafahoatra ny olan'ny kde.
Manana kmail voalamina amin'ny openboxmail sy fantsika nol.
Inona ny plugin ampiasainao amin'ny chat sy twitter?
ok aza lazaina amiko ... mety tsy mbola hitako io safidy io .___.
Heveriko fa tsara, mifikitra amin'ny KMail aho, satria manome ahy izay ilaiko (izay mamaky fotsiny ny mail xD) = P
Ary inona no tombony hitanao raha ampitahaina amin'ny famakiana ireo hafatra ao amin'ny pejin'ny serivisy mailakao (Gmail, Hotmail, sns)?
Tsy ampiasaiko amin'ireo serivisy ireo fa ampiasaiko amin'ny serivisy oniversite.
Eny, olona, ​​misy tombony maro.
Ohatra, ny zava-misy fa eo ambanin'io fampiharana io ihany ianao dia manangona ireo kaonty mailakao rehetra mba hamonjy anao ny fotoana hidiranao tsirairay amin'izy ireo (raha ohatra ka manana kaonty 3 na mihoatra ianao, toy ny tranga misy eto, sy ny rehetra izy ireo amin'ny mpamatsy samihafa). Na asaivo ao anatin'ny fandaharam-potoana iray ihany ny fifandraisana amin'izy rehetra.
Na eo aza izany, ankoatry ny tena ahazoana aina kokoa ny manokatra programa noho ny mitsidika tranokala 2 na 3.
Ary adinonao fa na dia kaonty iray monja aza no ampiasainao, dia haingana kokoa ny manokatra thunderbird toy izay manokatra firefox miaraka amin'ny add-on an'arivony (raha tsy ananantsika izy ireo dia mampiasa Midori: D) ary avy eo mameno ilay mavesatra be pejy mitantana mailaka (farafaharatsiny mavesatra be ny gmail)
Marina izany, mavesatra ny gmail
Mamaly an'i juaco
Misaotra Elav, nanome anao ity info ity misy zavatra maro izay tsy fantatro. Mila manome tsiro anao aho 🙂
Panko dia hoy izy:
Heveriko fa tena tsara ... miasa tsara ho ahy ny kmail misy ahy, miaraka amin'ny kaonty mailaka maro samy hafa, gmail, fomba fijery, gmx, openmailbox, lahatahiry eo an-toerana, ary na dia ireo mailaka ao anatiny aza ho an'ny fampandrenesana. . Ho hitako ny fomba nahaizako nanao an'izany rehetra izany, rehefa hitako fa tsy azo atao izany.
Manaiky tanteraka fa tianao kokoa ny thunderbird (ny fampidirana ao anaty tontolo kde dia avelantsika mandritra ny fotoana hafa izy io) noho ny kmail na amin'ny hafa, fa amidio ny bisikileta amin'ny alàlan'ny fanipazana diky amin'ny rindrambaiko hafa ...
Mamaly an'i Panko
Miarahaba anao! Ianao no nanao ny dingana voalohany hiverenana amin'ny XFCE
TPT. Tsy mino aho .. Total, nampiasa Pidgin, Firefox, Gimp, Inkscape foana aho ary mbola ao amin'ny KDE 😀
Eny, efa ela aho no nampiasa Thunderbird, saingy tsy nahalala ny sasany amin'ireo fanampiana azonao. Misaotra nizara, arahaba.
Tsisy fisaorana. Faly aho fa nanompo anao izy ireo.
Heveriko fa tena ratsy ny miresaka momba ny fampiharana iray manaratsy ny iray hafa ...
Nampiasa kmail aho, ary nahagaga ahy fatratra ireo fitaovana rehetra ananany hanampiana hitantana, hamaly ary hanafatra mailaka.
Ho an'ny chat sy ny anana hafa, misy fampiharana hafa tsara kokoa
Ny fitaovana hafa izay atoroko dia Claws
Amin'ny ankapobeny, tsy matoky sy misoroka ny fandaharan'asan'ireto orinasa lehibe ireto aho
Tsy misy tsara noho ny fitsapana hanaporofoana hevitra. (Izany hoe manaova lahatsoratra manohana ny tanjaky ny Kmail raha oharina amin'ireo programa hafa). Ny ambiny dia maneho hevitra nefa tsy misy porofo.
Imbetsaka aho no nanandrana te-ho tia ny KMail saingy ratsy ny fiafaranay ... Mampiasa Thunderbird aho ho an'ireo mailaka matihaniko sy SeaMonkey ho an'ny mailako manokana. Miombon-kevitra amin'izay rehetra voalaza ao amin'ilay lahatsoratra aho, niaina izany toe-javatra izany ihany aho ary izany no antony nijanonako tsy hampiasa ny KMail.
Ny hitako, Roberto, dia ny tsy tianao amin'ny Thunderbird. Tsy mbola nisy fotoana nilazako zavatra ratsy momba ny KMail, ny mifanohitra amin'izay, fantatro ny zava-tsoa ao aminy fa ny "tsy ananana" fotsiny no noresahiko raha oharina amin'ny Thunderbird.
Claws Mail dia mpividy mailaka tena tsara, saingy tsotra loatra amin'ny tiako, na tsy manana zavatra toa an'i Thunderbird na i KMail.
Zavatra iray hafa, raha miantso an'i Mozilla ianao ho iray amin'ireo orinasa lehibe Monopoly any, heveriko fa orinasa diso ianao.
Heveriko fa ilay manevateva fampiharana dia ianao, manandrana mametraka fisalasalana amin'ny fikasan'i Mozilla, izay raha ny marina dia TSY "orinasa" fa fototra; Raha manana fisalasalana amin'ny dikan'ireto teny ireto ianao dia mankanesa any amin'ny Wikipedia hahitanao ny momba ny zavatra tsirairay, raha ny fanazavana, ny "anana" lazainao dia nosoratana niaraka tamin'ny "B" an'io biby kely sofina io, satria miaraka amin'ny "V" midika hoe mangotraka ...
* Raha ny amiko dia nanana olana tamin'ny Kmail foana aho, efa nanandrana izany tamin'ny solosaina isan-karazany ary mbola tsy mandeha amin'ny laoniny mihitsy, na dia imbetsaka aza mihidy ny fampiharana nefa tsy misy resaka intsony.
* Mampihomehy ny fomba fiadian-kevitr'ireo mpankafy KDE hatrany ny milaza fa ny application K dia tsara kokoa noho ny application X satria misy fiasa miorina maro sy blablabla ..., fa rehefa mifanohitra amin'izay no izy, ny adihevitra dia tsy tiana ary lasa troll ny iray. Ho an'ny firesahana dia misy fampiharana tsara kokoa?. Mety izany, fa Thunderbird dia mampiasa "libpurple" ho an'ny fifampiresahana (eny, ny tranomboky Pidgin), noho izany ny rafitra fifampiresahana dia tsy tokony ho ratsy.
* Tsy orinasa i Mozilla. Izy io dia fototra tsy mitady tombom-barotra izay miasa amin'ny alàlan'ny fanomezana.
Ary gaga be aho fa ny DesdeLinux dia mirona amin'ity karazana «lahatsoratra» ity izay toa ny hafetsen'ny troll na vazivazy ratsy amin'ny Andron'ny Fools an'ny April
Ny hevitra faharoa ataonao sy ilay toa troll dia ianao. Tsy mahita zavatra ratsy ato amin'ity lahatsoratra ity aho, nosoratako, iray amin'ireo mpanorina ny DesdeLinux. Jereo, raha tsy tianao ilay lahatsoratra dia andramo ny manome hevitra amin'ny fototra mafy orina kokoa.
Raha mamerina fanamarihana tsy misy dikany hafa ianao na manafintohina amin'ny fomba rehetra ity bilaogy ity, ny mpampiasa azy ary ny mpitantana azy, azafady, fa ho antonony ianao satria tsy hilefitra intsony amin'ny fitondran-tena amin'ity karazana ity ao amin'ny DesdeLinux.
Ho fantatrao izay hatao. Ary farany, raha manana zavatra hafa holazaina ianao, momba ny DesdeLinux, na zavatra hafa, aza misalasala mandefa ny hevitrao amin'ny mailako: elav en desdelinux punto net.
Tsy azoko ny anton'ireo fanehoan-kevitra ireo, indrindra ireo roa nataon'i Roberto sy Panko.
Tena efa namaky tamin'ny antsipiriany ve ilay lahatsoratra? Misy fotoana manaratsy an'i Kmail ve i elav na milaza mazava zavatra manafintohina an'io rindrambaiko io? Ny hany ilazany an'i Kmail dia fehezanteny roa na telo manazava ny antony tsy maha-mifanaraka amin'ny zavatra ilainy i Kmail (noho ny fampiasana akonadi, fampiasana ny proxy ary ny fitehirizana hafatra).
Tsy nisy fotoana nilazany tamin'ny mpamaky fa ratsy na tsy mampiasa azy ny Kmail. Tena tsy azoko hoe inona ireo resaka 3 ireo ... Raha ho anao Kmail dia manao izay ilainao dia tonga lafatra. Elav dia mila fampisehoana hafa izay tsy aroson'i Kmail amin'izao fotoana izao, na tsy manao izany araka ny itiavany azy. Mpitantana mailaka tsara izy ary tsy mino aho fa misy olona ao amin'ity bilaogy ity misalasala mandritra ny iray segondra.
Aleo hatsahatra tsy ho fanatisme adala sy miaro, toy ny hoe naratra ny avonavonao, rindrambaiko iray na iray hafa satria fitaovana miasa ihany ... Tsy hanao izany ny fiainanao ...
Mianatra zavatra vaovao sy lahatsoratra tsara foana ianao, tokony hampiasa thunderbird bebe kokoa
ny hany fitsikerana (manaja) hitako dia an'i Akonadi, fa tsy an'i Kmail manokana. Tsy azoko ny fihetsika tsy mifanaraka amin'ny fiantsoana azy ho troll. Izaho manokana dia tsy namela ny tenako hotarihin'ilay default ao amin'ny DE na OS. Izaho dia mampiasa ireo programa ireo ihany na inona na inona sehatra. Navoaka tamin'ny sehatra maro ny programa Mozilla, noho izany dia natoky ahy foana izy ireo, taona maro lasa izay. Ny iray hafa nitovy tamin'izany dia ny Opera suite, mampalahelo fa nijanona tamin'ny fandefasana kinova amin'ny OS isan-karazany izy ireo. Raha ny olana dia i Mozilla io, dia saika misy zana-bozy * mitovy amin'ny debian.
Manaiky tanteraka. Kmail amin'ny maha mpitantana mailaka azy dia tsara, na dia tsy manana fahaiza-manao mitovy amin'ny Thunderbird aza ireo fanitarana. Ny olana (farafaharatsiny ireo nomeny ahy) dia avy amin'i Nepomuk sy Akonadi, izay manome ahy ny fahatsapana ho somary tsy milamina, saingy io no ho foto-kevitry ny lahatsoratra iray hafa.
mmm tsara, izaho dia mitovy ihany, ny zavatra tsara momba ny thunderbird dia ny fampiasanao azy amin'ny sehatra maro ary tsy voafetra amin'ny tontolo manokana sy ny birao ianao, noho izany dia manana tombony ny thunderbird azonao ampiasaina amin'ny windows, linux. miaraka amin'ny kde, gnome, firaisankina, xfce na inona no tadiavinao, ho ahy dia zava-dehibe izany satria manolotra anao io "fahalalahana" afaka miasa na aiza na aiza tianao io na inona na inona tontolo iainana.
Mazava ho azy, raha fantatrao fa tsy handao an'i kde mihitsy ianao, dia raha tsara ho anao ny kmail, safidy tsara izany. Tena miahiahy aho fa hafoiko ny kde amin'ny tontolo hafa satria nifanaraka tamin'izany aho ary toa feno indrindra tamiko, saingy imbetsaka aho no nieritreritra ny handao ny thunderbird satria io no nampiasaiko hatrizay ary tsy hitako izay antony ho an'ny fanovana.
Soa ihany fa ny Emacs koa dia manatanteraka ny fampiasa rehetra an'ny mpanjifa mailaka sy mandefa hafatra .. !!
Fanontaniana adaladala angamba fa tsy afaka namaly aho na aiza na aiza. Voasintona avy amin'ny mpizara mankany amin'ny pc ve ireo mailaka ary voafafa ao amin'ny mpizara ary tsy hitako eo an-toerana ihany izy ireo? Raha izany, tsy misy fomba fitantanana azy ireo fotsiny raha tsy misintona azy ireo amin'ny pc?
Rehefa mametraka ny kaontinao dia safidio ny IMAP 😉
Raha miresaka momba ny Thunderbird isika dia azonao atao ny mamela ireo hafatra amin'ny serivera tsy hanafoanana azy ireo. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy ampidirinao ny "Account setting" - "Setting Server", ary kitiho ny marika "Avelao ny hafatra eo amin'ny mpizara".
Ity safidy ity dia ahafahanao mampiasa ny client (Thunderbird) ary manamarina ny mailanao amin'ny browser.
Azonao atao koa ny "manamboatra" ny famafana azy arakaraka ny taonany; na rehefa mamafa azy ireo amin'ny client anao dia voafafa amin'ny servera. Ity safidy farany ity dia tsy nampiasaiko ary tsy fantatro ny fahombiazany.
Mampiasa Thunderbird aho, fa rehefa maika sy maniry haingana aho dia mampiasa mutt, lahatsoratra tena tsara!
Efa te hampiasa Thunderbird indray aho 🙂
Tsy hitako izay manakana azy roa
Thunderbird dia nandefa ny mailaka nataoko (POP3) betsaka, saingy miadana kokoa noho ny KMail. Ary koa, tsy hitako izay fomba hanampiana antsipiriany momba ny fisintomana mailaka ... fantatrao, firy ny mailaka ampidiniko, firy ny KB na ny MB, sns
cfclavijo dia hoy izy:
Te hahafantatra izay olana nanjo anao tamin'ny Akonaid aho.
Raha ny amin'ireo teboka hafa notononinao dia manantena aho fa efa nahatakatra tsara satria amin'ny kmail dia afaka manao izany koa aho.
-Manaova kaonty IMAP sy POP3.
-Manaova proxy (tsy misy proxy, tadiavo ny fikirakirana proxy ho azy, ampiasao URL proxy auto config, ampiasao ny fikirakirana proxy an'ny rafitra, ampiasao ny fikirakirana proxy voatondro amin'ny tanana)
Te hampahafantatra anao ilay Kontact namako akaiky koa aho, izay mampifandray ny manager post, manager manager, kalandrie, lisitra tokony hatao, fahana (toerana mamaky ity lahatsoratra ity), naoty….
Raha ny resaka chat, eny, heveriko fa mitombina ny hevitrao.
Mamaly an'i CFclavijo
Salama manana olana amin'ny fanavaozana Ubuntu 12.04 aho ary rehefa mandeha aho dia mangataka fidirana amiko sy mpampiasa no anaovako izany ary manontany ahy izy: ~ $ ary tsy fantatro izay angatahiny afaka manampy ahy ve ianao?
ny fakan-drivotra dia hoy izy:
Tena mahaliana izay anananao momba ny Thunderbird. Hatramin'ny androko Windows dia efa dimy taona mahery izay no tsy nampiasako azy. Saingy mila manontany anao fanontaniana iray aho, ary miala tsiny raha toa manafintohina izany, tsy ny tiako holazaina akory dia hoe: tena nampiasa ny Kmail ve ianao mihoatra ny fitsikilovana azy fotsiny? Ny ilazanao zavatra izay tsy hino an'izay nampiasa azy tamim-pahatokiana.
Avelao aho hiresaka ny lesoka rehetra lazainao fa ananan'i Kmail.
"Miaraka amin'ny Thunderbird dia afaka manana kaonty betsaka araka izay tadiaviko aho, na amin'ny GMAIL, Yahoo, Avy amin'ny Linux, Movistar Correo, Outlook, amin'ny fampiasana IMAP na POP3."
Mitovy tsy misy valaka amin'ny Kmail. Manana kaonty Gmail 2 aho, 2 hafa avy amin'ny GMX.es, iray avy amin'ny Autistici.org ary iray hafa avy amin'ny Openmailbox.org; rehetra amin'ny IMAP afa-tsy iray avy amin'ny GMX avy amin'i POP3.
"Araka ny efa nolazaiko teo aloha, afaka manapa-kevitra izay proxy hampiasaina aho na inona na inona rafitra, izay tsy haiko miaraka amin'ny KMail."
Tsy fantatro intsony izany satria tsy mampiasa proxy aho, fa raha tsy diso aho dia voalamina ao amin'ny KDE, ao amin'ny System Prefers / Proxy, sa tsy izany?
"Azoko atao ny mampiasa Thunderbird ho Mail Client, RSS Reader ary Messaging Client raha iriko"
Ary izany ve no heverina fa tombony, famoahana indray ilay programa miaraka amin'ireo fiasa izay mihoatra ny azo atao izay tsy tian'ny ankamaroan'ny olona? Maninona ianao no mila mpamaky gazety na mpitondra hafatra izay tsy mila mpanjifa mailaka fotsiny? Aleo ny client ny mailaka no ho izany fa tsy zavatra hafa, ary mijanona ho maivana.
Izay te hanana serasera serasera feno dia manana Kontact (http://userbase.kde.org/Kontact/es ny antontan-taratasy dia tsy dia feno ary adika antsasany, azafady), miaraka amin'ny mpamaky vaovaonao: Akregator, mpitantana ny fifandraisanao: Kaddressbook, ny agnda anao, sns; ary marina fa ny mpitondra hafatra, KTP, dia mbola tsy natambatra araka ny niriany fa teo no nandehanany.
Ny maodely mazava tsara ka ny mpampiasa tsirairay dia mametraka izay tadiaviny hampiasaina dia ny lakile iray hafa mahatonga ny Linux sy ny tontolo iainany ho ambony noho ny SS.OOs hafa: ny mpampiasa dia manapa-kevitra izay tiany, tsy voatery hitondra programa goavambe mampihemotra ny solosaina na mihinana ny habaka kapila tsy ilaina izy ireo raha tsy mila azy ireo ianao (tsy marina tanteraka izany amin'ny fizarana mialoha, fa raha mampiasa Gentoo ianao na zavatra mitovy amin'izany, dia azonao atao ny misafidy ohatra handrafetana ny birao tsy misy fanohanana ireo mpanonta na scanner raha tsy mikasa ny hampiasa an'io solosaina io amin'ireo fitaovana ireo ianao).
«... Ny tiako holazaina dia afaka miresaka amin'ny contact Facebook-ko, GMail, ary serivisy hafa mampiasa XMPP»
Miaraka amin'ny KTP (http://userbase.kde.org/Telepathy/es) Azonao atao ny miresaka amin'ireo rehetra ireo ary miaraka amin'ireo Skype, Yahoo, ICQ, efitrano IRC, sns, sns; ary manantena aho fa tsy haharitra izy ireo hampihatra ny fanohanan'ny Telegram.
«Afaka mitondra ny mailako any amin'izay toerana tsy misy olana aho. Mba hanaovana izany dia mila mandika ilay folder ~ / .thunderbird fotsiny aho. "
~ / .local / share / local-mail / Miaraka amin'ireo lahatahiry miafina tafiditra ao, mazava ho azy.
Ny zavatra tokana ekeko dia, amin'ny lafiny iray, amin'ny resaka fanitarana, marina kokoa ianao noho ny olo-masina: tena fihemoran'ny programa toa ny Kontact / Kmail / KTP, na i Konqueror aza (miaraka amin'ireo mpitety ratsy rehetra. dia sy ny faharetan'ny nametrahan'izy ireo azy tamin'ny kinova 4 ho mpitantana rakitra) dia tsy manohana ny fanitarana; ary etsy ankilany, amin'ny teny goavambe dia i Akonadi. Tsy ny mailako, fa very ny fanamarihako Kjots izay nanjavona noho ny lesoka sasany teo amin'ny fitantanana ireo data Akonadi. Mbola maitso maitso izy io, saingy efa mahavita saika ny zavatra rehetra nampanantenainy: mahafinaritra ny mitady mailaka izay misy teny manokana avy amin'i Kicker; Tsy mila maka tahaka ny lahatsoratry ny mailaka mety hilaiko amina fotoam-pianarana sasany na ho an'ny naotiko aho, apetaho ao anaty rakitra ary tahirizo ao ambanin'ny anarana miavaka ao anaty fampirimana mety. Tsia, Alt + F2, mitendry ary misaotra an'i Akonadi sy Nepomuk dia haseho ahy ireo mailaka rehetra izay mirakitra izay nofidiko. Inona no tsy maintsy miasa tsara kokoa? Azo antoka, fa lazao amiko, azonao atao ve izany amin'ny thunderbird?
Tena manaja an'i Thinderbird aho. Io ilay programa izay nanokatra ny masoko ary nasehony ahy fa misy tontolo malalaka kokoa ankoatry ny tranom-borona maro loko ary miaraka amin'ny alika Microsoft mihetsika. Mino tanteraka aho fa nisy izany, ary amin'ny zavatra lazainao dia tsy miahanahana aho fa mbola mitohy io, mpanjifa mailaka tena tsara, saingy tsy mieritreritra aho fa raha midera ny hatsarany dia ilaina ny manome vaovao diso momba ny mpifaninana aminy; Ka heveriko fa tokony ho marin-toetra ianao ary hanitsy ny lahatsoratrao mba hisaintsaina izay rehetra nolazaiko taminao, satria diso hevitra ilay lahatsoratra. Mazava ho azy fa zahao ny tsirairay amin'ireo zavatra nolazaiko taminao mba hahitanao fa tsy mpankafy Kontact aho: fantatro tsara fa tsy lavorary izy io, fa ny tena marina dia vanim-potoana.
Miarahaba ary miala tsiny amin'ny biriky, hehe.
Mamaly an'i Recesvinto
Llorenç dia hoy izy:
Bravo! Indraindray ny fanehoan-kevitr'ireo mpamaky izay mahalala ny zavatra lazainy dia tsara kokoa noho ireo lahatsoratra ihany. Manantena aho fa nampahafantarina tsara kokoa ireo bilaogera alohan'ny nanoratana. Ny tontolon'ny bilaogy dia tsy tsy ampy habetsahana fa ny kalitao.
Valiny tamin'i Llorenç
Misaotra nizara ny zavatra niainanao, nahasoa ahy io,
Thunderbird dia tsara lavitra kokoa, marina izany. Ny tiako asongadina dia tato ho ato dia nijanona tsy mandeha intsony ny sivana (fitsipika) ao amin'ny gmail. Izay tena manakiana.
Andres Garcia dia hoy izy:
Tena tsara! Mitady famenon-javatra aho mba hanoratana an-tsoratra ny mailaka, na hadisoana ireo hadisoana ary alefaso hatrany ilay manaraka
Valiny tamin'i Andrés Garcia
Rafrey dia hoy izy:
Mampiasa kmail miaraka amina kaonty mailaka maromaro aho, sivana hametrahana ireo mailaka ao anaty lahatahiry misy azy sns. ary tena mandeha tsara aho. Ny mailaka ihany no ampiasako azy.
Te hifindra monina aho satria isaky ny mandrehitra ny solosaina aho dia atsipy mandritra ny antsasak'adiny ny akonadi-nepomuk, mandany ny loharano rehetra.
Misy mpitantana mailaka izay manaiky ny fanondranana kmail-PIM? Na ahoana ny fanovana ny laharam-pahamehana ho akonad ho an'ny ahem. tsara 15?
Valio i Rafrey
Play NeoGeo ao amin'ny GNU / Linux
Kitapom-baovao EOS X - Amboary ny Ubuntu 12.04